﻿	အကောင်းဆုံးသောအစဉ်အလာ Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်း (အလင်း & fluffy) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အကောင်းဆုံးအစဉ်အမြဲ Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်း
Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်း ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်ထိပ်ဖျား၌ငါ့အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်! ရိုးရိုးဒိန်ခဲဒြပ်ပေါင်း (အမှန်စင်စစ်)၊ ကြွယ်ဝမှုအတွက်ထောပတ်နှင့်အရသာကောင်းသော tangy- မွှေးသောအရသာအတွက်အမှုန့်သကြားနှင့်ထုတ်ယူမှုအရာ!
ဒါဟာကြွယ်ဝသော creamy နှင့်လုံးဝ dreamy ပါပဲ။
ငါ Cream ဒိန်ခဲအေးခဲနေတယ်။ ဒါဟာအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော topper ပါပဲ မုန္လာဥနီကိတ်မုန့် ဒါမှမဟုတ် ငှက်ပျောပေါင်မုန့် (သို့မဟုတ်တစ်ဇွန်း, ya ငါနှင့်အတူရှိပါသလဲ?)!
ချိုသောအရသာနှင့်အရသာကောင်းမွန်သောဒိန်ခဲအေးခဲအောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါက၊ ဒီနည်းကို သင်ရှာနေသည့်စာရွက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက် Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းပါပဲ။
Perfect Cream ဒိန်ခဲအေးခဲအောင်လုပ်နည်း
Cream ဒိန်ခဲသည်အေးခဲနေသောနှင်းခဲ ဖြစ်၍ ၎င်းနှင့်မတူနိုင်ပါ Buttercream Frosting က၎င်း၏ပုံသဏ္holdာန်ကိုကိုင်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့။
အရသာအတွက်သံပုရာဖျော်ရည်သို့မဟုတ် vanilla ထည့်ပါ။
Runny Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းအတွက်ပြတ်တောက်ခြင်း
ဒီစာရွက်အထူနှင့်ချောမွေ့သောပျော့ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင်းခဲထုတ်လုပ်သည်။ ဒါဟာငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ် အကောင်းဆုံးအစဉ်အမြဲငှက်ပျောသီးကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်မည်သည့်9× 13 ကိတ်မုန့်။ ဒါဟာမယားစကားပေါ်မှာperfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမယ့် ဒီမုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲပိုက်များအတွက်၎င်း၏ပုံသဏ္holdာန်ကိုကိုင်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ပန်းပွင့် (ကတကယ်ပျော့ပျောင်းအဖြစ်) ။
crockpot အတွက် cracker စည် cheesy hash အညိုရောင်စာရွက်
Cream ဒိန်ခဲ အနိမ့်အဆီမုန့်ဒိန်ခဲကောင်းစွာအပြည့်အဝအဆီကိုသာအသုံးပြုမအလုပ်လုပ်ဘူး! သေချာအောင်လုပ်ပါ တရားမျှတ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်အခန်းအပူချိန်၊ ဖြန့်ဖြူးမယ့် Block ကိုမုန့်ဒိန်ခဲကိုသုံးပါ။
အလွန်အကျွံ အမှုန့်သကြားထည့်သွင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် fluffy သည်အထိရောမွှေပါ။ အလွန်အကျွံရောနှောခြင်းကနှင်းခဲကိုဆိုးစေသည်။
ချမ်း ၎င်းကိုအအေးခံခြင်းက၎င်းကိုထူအောင်ကူညီနိုင်သည်။ နွေးထွေးသောကိတ်မုန့် (သို့မဟုတ်အလွန်နွေးထွေးသောအခန်းတစ်ခန်း) သည်၎င်းကို ပို၍ ဆိုးစေနိုင်သည်။
အရည် ၎င်းသည်သကြားနှင့်ရောနှောရန်အလွန်သေးငယ်သောအရည်ကိုလိုအပ်သောကြောင့် vanilla / lemon ဖျော်ရည်များထပ်ထည့်ခြင်းဖြင့်နှင်းခဲ၏တသမတ်တည်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၎င်းသည်သာမန်အေးသောနေ့ဖြစ်ပါက (သင်နေထိုင်ရာပေါ် မူတည်၍) သင်၏ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်များသည်ရက်ပေါင်းများစွာအတွက်ကောင်တာပေါ်တွင်ထိုင်ရန်အဆင်ပြေသည်။
သငျသညျပူသောစိုစွတ်သောinရိယာ၌နထေိုငျ (သို့မဟုတ်နွေရာသီအလယ်၌ ... ဖီးနစ်ဟုပြော) လျှင်, ငါသည်သင်တို့၏မုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲနေသောရေခဲသေတ္တာအကြံပြုချင်ပါတယ်။ သင်၏စာရွက်ကို (၃) ရက်ထက် ပို၍ ကြာမြင့်ရန်သင်စီစဉ်ထားပါက၎င်းကိုအအေးခံရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိမ့်မည်။ ငါထပ်မံပျော့ပြောင်းခွင့်ပြုမပြုအမှုဆောင်မတိုင်မီမိနစ် 20 ခန့်ကကောင်တာပေါ်မှာထုတ်တင်ချင်တယ်။
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှုနှစ် ခွက် စာရေးသူHolly N. ဤသည်အကောင်းဆုံးအိမ်လုပ်မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲဖြစ်၏။ ဒါဟာချိုမြိန်ရုံမှန်ကန်သောငွေပမာဏနှင့်သံပုရာ၏အရိပ်အမြွက်နှင့်အတူကြွယ်ဝသောနှင့် creamy ပါပဲ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၈ အောင်စ ဒိန်ခဲမုန့် အခန်းအပူချိန်
▢⅓ ခွက် ထောပတ် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၃ 3.5 ခွက်ရန် သကြားမှုန့်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ ဒါမှမဟုတ်သံပုရာဖျော်ရည်
▢1 ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သံပုရာ zest (ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်)
ချိစ်ဒိန်ခဲနှင့်ထောပတ်ကိုအလွယ်တကူရောနှောပြီးချောမွေ့စွာရောနှောပါ။ vanilla (သို့မဟုတ်အသုံးပြုပါကသံပုရာဖျော်ရည်နှင့်သံပုရာ zest) တွင်ရောမွှေပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ5ရက်အထိသိုလှောင်ထားပါတယ်။
* အာဟာရပမာဏကိုစားပွဲတစ်ဇွန်း ၁ ဇွန်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ စာရွက်နှင်းခဲ2about ခွက်စေမည်။
သော့ချက်စာလုံးမုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲ သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
Frosting & Fillings များပိုချစ်ပါ
ချောကလက် Ganache Frosting
လတ်ဆတ်သော Lemon Buttercream Frosting
၅ မိနစ်ချောကလက် Ganache